Okwakamuva kumathelevishini | Kusuka kuLinux
Uma kukhulunywa ngobuchwepheshe, amathelevishini aphakathi kwemishini ecelwa kakhulu ngabantu abathanda ukuzijabulisa okuhle. Futhi ngentuthuko esele yenziwe isikhathi esithile manje, akumangazi ukuthi ukukhula kwabo emakethe kuyanda. Isimo esikhona manje maqondana nalezi zinto ezithile yileso se- amathelevishini amadivayisi ahlakaniphile, asevele amukelwa kabanzi ngumthengi womphakathi ngenxa yezinzuzo zawo eziningi.
Okokuqala sibheke izikrini eziyizicaba ezenziwe ngobuchwepheshe be-LED ne-LCD, lapho kwatholakala khona isithombe esibukhali futhi salondolozwa kakhulu emandleni kagesi nendawo, ngenxa yomklamo wazo we-ultra-light and modern.
Muva nje, i Ubuchwepheshe be-3d yafakwa ekwakhiweni kwamathelevishini, ivumela abantu ukuthi bajabulele ama-movie abawathandayo, ingeza amalensi akhethekile nemidwebo ephezulu yokunikeza okuhlangenwe nakho okubukwayo kunanini ngaphambili.
Manje ubuchwepheshe be amanethiwekhi angenantambo ekuxhumaneni ne-Wi-Fi, seyifakwe kumathelevishini, ngoba ukungena kwi-Intanethi kunika abasebenzisi izinketho zokubuka ezibanzi, futhi kungadlula nensizakalo yekhebula.
Ezinye zezinhlobo ezintsha eziphume phakathi kokuphela konyaka odlule nasekuqaleni kuka-2013, ne-Samsung Smart TV, isikrini esingama-intshi angama-75 imisebenzi yayo ifaka phakathi ukuphequlula ngokuhlanganyela, ukulanda izinhlelo zokusebenza nokuvumelanisa nemishini yomsindo yedijithali. Kukhona futhi imodeli yeBravia 4K evela kwaSony, enamayintshi angama-84 kanye nesinqumo esikwazile ukudlula ukuchazwa okuphezulu ngamahlandla ama-4.
Abakwa-LG bakhiphe nethelevishini engamasentimitha angama-84, efaka uhlelo lomsindo olusezingeni eliphezulu kanye nenketho ye-Dual Play, lapho imidwebo yegeyimu yevidiyo ingabukwa ngemodi yesikrini esigcwele.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Okwakamuva kumathelevishini